पाउन्डस्लोट्समा जम्मा गर्ने विधिहरू
एक जम्मा गर्न को लागी तपाईले PoundSlots.com मा खेल्नको लागि पहिले दर्ता गर्नु पर्छ।
तपाईंले दर्ता र लगईन गरेपछि, तपाईं निम्न निर्देशनहरू पालना गरेर वास्तविक पैसाको लागि खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ:
"जम्मा" विकल्पमा क्लिक गरेर "क्यासियर" प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईको मनपर्ने जम्मा विधि छान्नुहोस्।
छानिएको निक्षेप विधि अनुसार प्रासंगिक फारम भर्नुहोस्, डिपोजिट क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईंको छनौट भुक्तानी विधिलाई चार्ज गरिनेछ र तपाईंको खातामा जम्मा हुनेछ।
तपाइँ लेनदेन विवरण को साथ एक ईमेल सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ।
PoundSlots.com पछिल्लो ईन्क्रिप्शन र सुरक्षा टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ तपाईंको वित्तीय जानकारी पूर्णतया सुरक्षित छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
तपाईलाई छनौट गर्नका लागि हामी विभिन्न किसिमका निक्षेप विधिहरू प्रदान गर्न खुसी छौं - यहाँ क्लिक गर्नुहोस् थप विवरणहरूको लागि।
Olorra प्रबंधन लिमिटेड, PoundSlots.com मा लेनदेन सेवाहरू प्रदान गर्दछ - थप सिक
प्लेयर सीमा र बहिष्करण - यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू
तत्काल £ / € / $ / ¥ / ₹
हामी भिसा, भिसा डेबिट, भिसा इलेक्ट्रोन, भिसा डेल्टा, मास्टरकार्ड, मास्ट्रो, जेसीबी, सोलो, स्विच, डाइनर क्लब र डिस्कभर सहित धेरै फरक क्रेडिट र डेबिट कार्डहरूबाट जम्मा स्वीकार गर्दछौं।
तपाईंको डेबिट / क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर द्रुत बहु मुद्रा लेनदेन।
कोषहरू तत्काल तपाईंको PoundSlots.com खातामा उपलब्ध हुन्छन् एक पटक स्थानान्तरण
पूर्ण रूपमा भुक्तान कार्ड उद्योग डेटा डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) का साथ अनुपालन
सम्पर्क र समर्थन: तपाईको क्रेडिट / डेबिट कार्ड सम्बन्धी कुनै समस्याका लागि हाम्रो समर्थनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
कसरी फन्ड गर्ने: फण्डहरू तपाईंको क्रेडिट / डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर जम्मा गर्न सकिन्छ।
क्रेडिट कार्डको साथ जम्मा राशि बेलायतका खेलाडीहरूको लागि उपलब्ध छैन
तत्काल £ / €
पेपैल एक विश्वव्यापी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली हो जुन परम्परागत विधिहरूको इलेक्ट्रॉनिक विकल्पको रूपमा अनलाइन स्थानान्तरणहरूलाई समर्थन गर्दछ।
PayPal मात्र ब्रिटेन र आयरल्यान्ड बाट ग्राहकहरु को लागी उपलब्ध छ।
प्रत्येक लेनदेन उन्नत ईन्क्रिप्शन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर ईन्क्रिप्ट गरिएको छ।
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईंको PoundSlots.com खाता माथि गर्न तपाईंको PayPal खाता प्रयोग गर्नुहोस्। कोषहरू तत्काल तपाईंको PoundSlots.com खातामा उपलब्ध हुन्छन् एक पटक स्थानान्तरण।
थप जानकारीको लागि: www.paypal.com
PayviaPhone एक नयाँ पीढी भुक्तानी समाधान हो जुन तपाईंको मोबाइल फोन प्रदायक द्वारा बिलिंगको माध्यमबाट अनलाईनमा छिटो र सरल जम्मा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पेभियाफोन यूके ग्राहकहरुका लागि मात्र उपलब्ध छ।
न्यूनतम जम्मा: £ १०।
फोन मार्फत भुक्तानी वापसी प्राप्त गर्न सक्दैन।
A 15% प्रशोधन शुल्क PayviaPhone द्वारा बनाईएको सबै जम्माबाट कटौती हुनेछ।
तत्काल £ / € / $ / CAD$
Paysafecard अनलाइन खरीदको लागि युरोपको पहिलो प्रिपेड कार्ड हो। यो एक प्रीपेड अनलाइन कलिंग कार्ड जस्तै काम गर्दछ र युरोप मा १०,००० आउटलेटहरू मध्ये एकमा किन्न सकिन्छ जुन कार्ड पेट्रोल स्टेशनहरू, बैंकहरू र अन्य थुप्रै आउटलेटहरू सहित कार्ड बोक्दछ। Paysafecard को एक ठूलो फाइदाहरु यो हो कि तपाईं आफ्नो अनलाइन गेमिंग कोष गर्न नगद प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र तपाईंको व्यक्तिगत र वित्तीय जानकारी कुनै पनि तेस्रो पक्षसँग साझा गर्न आवश्यक छैन। अधिक जानकारीको लागि www.paysafecard.com मा लगईन गर्नुहोस्।
निक्षेप सीमा: न्यूनतम: £ / € / $ / CAD$ 10, अधिकतम: £ / € / $ / CAD$ 700
तपाइँको जीतलाई छिटो र सरल रूपमा paysafecard को साथ भुक्तान गर्नुहोस्।
ट्रस्टली एक टेक्नोलोजी कम्पनी हो जसले विकास र अनलाइन भुक्तानी समाधान बेच्छ। भरोसाले अनलाइन बैंकिंग ई-भुक्तान सक्षम गर्दछ र अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्दो सुविधाजनक, सरल र सकेसम्म सुरक्षित बनाउन काम गर्दछ। विश्वासपूर्वक तपाईं आफ्नो बैंक को भरोसा अनलाइन बैंकिंग वातावरण भित्र भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। Https://trustly.com/en/ मा थप जानकारी फेला पार्नुहोस्
निक्षेप सीमा: न्यूनतम £ / € / $ 20, अधिकतम: £ / € / $ 700
तपाईंको जीतलाई छिटो र सरल रूपमा विश्वासपूर्वक भुक्तान गर्नुहोस्।
मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस् www.muchbetter.com/
तत्काल £ / € / $ / CAD$ / ₹
इकोअकाउन्ट प्रयोगकर्ताहरूले विश्वव्यापी रूपमा सबै एक अनलाइन खातामा पैसा पठाउन र खर्च गर्न सक्दछन्।
सुरक्षा र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारीको अखण्डता शीर्ष प्राथमिकता हो।
कसरी फन्ड गर्ने: इकोपाइजको साथ एक नि: शुल्क अनलाइन खाता खोल्नुहोस् र जम्मा गर्नको लागि तपाईंको खाता आईडी प्रयोग गर्नुहोस्।
न्यूनतम निक्षेप: £ / € / $ / CAD$ / ₹ 20।
थप जानकारी: www.ecopayz.com
तत्काल CAD $
इन्ट्राक कम्बाइन्ड एक चाँडो र सुरक्षित तरीका हो तपाईको अनलाइन बैंकिंग सेवा को सुरक्षा भित्र पैसा पठाउन।
क्यानाडाली ग्राहकहरूको लागि मात्र उपलब्ध, इन्ट्राक संयुक्तले 'Interac अनलाइन' र 'Interac e-Transfer' संयोजन गर्दछ।
न्यूनतम निक्षेप: CAD $ 20।
थप जानकारी: www.interac.ca
बिटबे भुक्तानी एक भुक्तानी प्रोसेसर हो जसले क्राइप्टो प्रयोगकर्ताहरूलाई साधारण फिएट मुद्राको लागि क्रिप्टो साटासाट गरेर अनलाइन भुक्तानी गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी फन्ड गर्ने: रकम छनौट गर्नुहोस् र अर्को पृष्ठमा रहेको डिपोजिट क्लिक गर्नुहोस् तपाइँ प्रयोग गर्न चाहानुभएको मुद्रा छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग मोबाइल वालेट छ भने, द्रुत भुक्तानीको लागि सुरक्षित कोड स्क्यान गर्नुहोस्। अन्यथा केवल तपाईंको वालेटमा रकम र भुक्तान ठेगाना प्रतिलिपि गर्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्।
बिटबे भुक्तानी युके बाट खेलाडीहरुका लागि उपलब्ध छैन।
न्यूनतम निक्षेप: $ २०।
थप जानकारीको लागि क्लिक गर्नुहोस् यहाँ.
Zimpler एक मोबाइल भुक्तानी सेवा हो जुन फिनल्याण्डका ग्राहकहरुका लागि भुक्तानी सहज बनाउनका लागि विकसित भयो।
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईंको फोन नम्बर र प्रमाणिकरण कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईंले पाठ सन्देशको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। एउटा Zimpler खाता तपाईंको लागि सिर्जना गरिएको छ जुन भुक्तान पूरा गर्न यसलाई चाँडो र सुरक्षित बनाउँदछ तपाईं जुन साईट प्रयोग गर्नुहुनेछ।
न्यूनतम जम्मा: € २०।
थप जानकारी: www.zimpler.com
NETeller एक द्रुत र अत्यन्त सुरक्षित अनलाइन लेनदेन सेवा हो जसले तपाईंलाई तपाईंको PoundSlots.com खातामा तत्काल पैसा जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ।
युनाइटेड किंगडमका ग्राहकहरुका लागि उपलब्ध छैन।
वेबसाइट: https://www.neteller.com बहु भाषाहरूमा उपलब्ध छन्, २//7 समर्थन
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईं क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर तपाईंको NETeller खाता फन्ड गर्न सक्नुहुनेछ (कार्ड भुक्तानहरू वास्तविक समयमा प्रक्रिया हुन्छ), अनलाइन चेक (EFT), InstaCASH, र बैंक वायर।
निक्षेप सीमा: न्यूनतम £ / € / $ / CAD$ २०, अधिकतम £ / € / $ / CAD$ 5000 (NETeller द्वारा अतिरिक्त सीमाहरू लागू हुन सक्छ)
तत्काल € / $
Skrill Moneybookers को लागी नयाँ नाम हो, इन्टरनेट मार्फत पैसा हस्तान्तरण को लागी एक सुविधाजनक ग्लोबल भुक्तान सेवा
Supported० भन्दा बढी देशहरूमा १२ समर्थित भाषाहरू र घरेलु भुक्तानी विकल्पहरूको साथ स्थानीय सेवा
अतिरिक्त सेवाहरू जस्तै एसएमएस र फ्याक्सहरू पठाउने।
सम्पर्क र समर्थन: समर्थन समर्थन मा ईमेल समर्थन उपलब्ध छ www.skrill.com
कसरी फन्ड गर्ने: स्क्रिलको साथ तपाईंको सबै क्रेडिट / डेबिट कार्ड र बैंक विवरणहरू रेजिस्टर गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई २०,००० अनलाइन शपहरूमा भुक्तान गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। यसको मतलव तपाईले तिनीहरूलाई प्रत्येक पटक प्रदान गर्न आवश्यक पर्दैन जब तपाई सामान र सेवाहरू अनलाइन खरीद गर्न चाहानुहुन्छ।
यूपीआई एक सबैभन्दा सुरक्षित भुक्तानी विधि हो जुन भारतमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, जसले ग्राहकहरूलाई भारतका धेरै सहयोगी बै banks्कहरू मध्ये एकमार्फत बैंक स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी फन्ड गर्ने: रकम छनौट गर्नुहोस् र जम्मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंको अद्वितीय UPI परिचयकर्ता (VPA) प्रविष्ट गर्नुहोस् र निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
यूपीआई भारत बाट मात्र ग्राहकहरु को लागी उपलब्ध छ।
न्यूनतम निक्षेप ₹ २०००
भारतमा सामान्यतया प्रयोग हुने सबैभन्दा सुरक्षित भुक्तान विधिमध्ये नेटब्याkingकि one एक हो, जसले ग्राहकहरूलाई भारतमा सहयोगी बैंकहरूको माध्यमबाट बैंक स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी फन्ड गर्ने: रकम छनौट गर्नुहोस् र जम्मा क्लिक गर्नुहोस्। ड्रप डाउन सूचीबाट तपाईंको बैंक चयन गर्नुहोस्, तपाईंको बैंक खातामा लगईन गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
नेटबैंकिंग भारतबाट आएका ग्राहकहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ।
सोफोर्ट एक बजार अग्रणी भुक्तानी विधि हो जुन अष्ट्रियामा प्रयोग गरिन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै बैंक मार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्षम गर्दछ।
SOFORT अनलाइन भुक्तानको एक सुरक्षित र सुविधाजनक तरीका प्रदान गर्दछ। तपाइँ तपाइँको आफ्नै बैंक को एक सुरक्षित अनलाइन बैंकिंग वातावरण भित्र तिर्न सक्नुहुन्छ। एक अभिनव प्रणालीको साथ सरल रूपमा भुक्तान गर्नुहोस्, जसरी तपाईं अनलाइन बैंकिंग मार्फत सामान्यतया बिलहरू तिर्नुहुन्छ। मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस् https://www.sofort.com/.
निक्षेप सीमा: न्यूनतम € २०, अधिकतम: € 5000
GIROPAY एक सजीलो अनलाइन भुक्तानी विधि जर्मनीमा प्रयोग गरीन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै बैंक मार्फत अनलाइन भुक्तान गर्ने विकल्प प्रदान गर्दछ।
GIROPAY ले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन भुक्तान गर्ने एक सुरक्षित र सुरक्षित तरीका प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो बैंकको एक अनलाइन बैंकिंग वातावरण मार्फत निरन्तर भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। छिटो र सरल भुक्तान गर्नुहोस् https://www.giropay.de/.
वेबमनी ट्रान्सफर एक वैश्विक बस्ती प्रणाली र अनलाइन व्यापार गतिविधिहरूको लागि वातावरण हो।
प्रणालीले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबमनी इकाइहरू (WM- एकाइहरू) प्रयोग गरेर वास्तविक समयमा सुरक्षित लेनदेन गर्न सक्षम गर्दछ। कुनै WebMoney खाता खोल्न वा अपरेट गर्न कुनै बैंक खाता वा क्रेडिट कार्ड आवश्यक पर्दैन।
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईं केवल क्यासियर पृष्ठमा वेबमनी विकल्प चयन गर्नुहोस् र निक्षेप प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
निक्षेप सीमा: न्यूनतम € / $20, अधिकतम: € / $5000
तपाईंको जीतलाई छिटो र वेबमनीको साथ भुक्तान गर्नुहोस्।
मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस् https://www.wmtransfer.com/
सामान्य मद्दत वा प्राविधिक प्रश्नहरूको लागि कृपया हामीलाई तलका फोन नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्: +7 (5 5)) 7२7--43-33 मस्को / +7 (12१२) 9० -0 -२०- .१ सेन्ट-पीटर्सबर्ग।
द्रुत BankTransfer एक नियमित बैंक स्थानान्तरण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सीधा आफ्नो बैंक खाता मार्फत स्थानीय बैंक भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईं केवल क्यासियर पृष्ठमा फास्ट बैंकट्रान्सफर विकल्प चयन गर्नुहोस् र निक्षेप प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
युटलर स्थापना गरिएको थियो कि फिनिशका ग्राहकहरुलाई तिनीहरुको अनलाइन बैंक खाताहरु प्रयोग गरी द्रुत बैंक भुक्तान गर्न।
कसरी फन्ड गर्ने: तपाईं केवल क्यासियर पृष्ठमा युटेलर विकल्प चयन गर्नुहोस् र संकेत गरिएको जम्मा प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
निक्षेप सीमा: न्यूनतम £ / € / $20, अधिकतम: £ / € / $5000
युटलरको साथ तपाईको जीतलाई छिटो र सरल रूपमा भुक्तान गर्नुहोस्।
मा अधिक जानकारी खोज्नुहोस् https://www.euteller.com
अधिक जानकारीको लागि कल गर्नुहोस्: +358 (०) 56००4564००8
एकचोटि तपाईंले तपाईंको अनुरोधित कोषहरू तपाईंको खातामा थप्नुभयो, त्यसपछि तपाईंलाई सबै प्रमाणीकरण विवरणहरू थपेर एक पुष्टिकरण ईमेल पठाइनेछ।
यदि तपाईंसँग कोष जम्मा गर्नेमा कुनै समस्या छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं हाम्रो एक उच्च प्रशिक्षित ग्राहक सेवा प्रतिनिधि २ 24/7 लाई ईमेल वा अनलाईन च्याट मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ - हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
Olorra व्यवस्थापन लिमिटेड को हो?
सुरक्षित इन्टर्नेट लेनदेन प्रोसेसि expert विशेषज्ञ, ओलोरा म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले, पाउन्डस्लोट्स.कमानमा लेनदेन सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
जब PoundSlots.com सदस्यहरूले उनीहरूको गेमि accounts खाताहरूमा निक्षेपहरू गर्छन्, ओलोरा व्यवस्थापन लिमिटेड प्रोसेसर मध्ये एक हो। कम्पनीले तपाईंको क्रेडिट / डेबिट कार्ड बिल गर्नेछ र लेनदेन तपाईंको नाममा निम्न नामहरू मध्ये एकमा पोस्ट गरिनेछ:
Olorra प्रबंधन सीमित
Olorra सीमित CASHOO.EU
माथिका नामहरू कहिलेकाँही शहरको नामसँगै देखा पर्न सक्छन्। यसको कारण यो हो कि ओलोरा म्यानेजमेन्ट लिमिटेडसँग विश्वभरि थुप्रै बैंकिंग प्रणाली गेटवेहरू छन्।
यो सिफारिश गरिन्छ कि कार्ड होल्डरले लेनदेन रेकर्ड, व्यापारी नीति र नियमहरूको प्रतिलिपि राख्नु पर्छ।